Shiinaha: Doorka Haweenka, Dharka Dhaqanka iyo Ciyaaraha Dhaqanka | Wararka Safarka
Shiinaha: Doorka haweenka, dharka caadiga ah iyo cayaaraha dhaqanka
Carmen Guillen | | Shiinaha, dhaqanka, General
Shiinaha, waa dalka loo yaqaan "Rafaa Millennial", inkasta oo magaceeda soo jireenka ahi yahay Zhong guo ama "waddanka bartamaha", maaddaama ujeedadu ahayd in ay ahayd waddanka ugu bartamaha badan dhulka, marka laga eego juquraafi ahaan, siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaanba.
In kasta oo xuduudaha kala duwanaan jireen qarniyo badan, haddana xuduntiisa dhexe weli wey taagan tahay, midda ay ku dhalatay ilbaxnimada Shiinaha: Webiga Huanghe, taas oo, sababtuna tahay jiinka loes, waxay heshay madaahibta "Jaalaha dhulka" o "Wadan Jaale ah".
Waxaan ka wada hadli karnay faahfaahinta aan la soo koobi karin ee waddankan gaarka ah, laakiin qodobkan waxaan dooneynay inaan xoogga saarno saddex fikradood (caadooyinka Shiinaha):
Doorka ay haweenku ku lahaayeen ilbaxnimadan, sannadihii la soo dhaafay.
Dharka caadiga ah ee dalka iyo astaamahiisa.
Ciyaaraha dhaqanka ee dalka Shiinaha.
2 Labiska, booskaaga bulsheed
3 isboorti dhaqameed
Inbadan, sanado badan kahor, waqtiyadii ugu da'da weynaa taariikhda Shiinaha, waxay xukumi jirtay qaybahaas mattarka: carruurtu waxay korsadeen magaca dambe ee hooyada oo ma ahan magaca aabaha. Waxay ahayd wax iska caadi ah inaan mararka qaar la ogaan magaca aabaha, waxay ahayd faahfaahin yar. Waxaas oo dhan "mudnaanta" ayaa dhammaaday xilligii boqortooyadii Zhou, meesha haweeneydu way luntay shaqooyinkeedii ugu badnaas. Tan iyo waagaas, iyo ilaa iyo hada, hadafka haweenka ee Shiinaha wuxuu ahaa guriga qoyska, tan gudaheeda, had iyo jeer waxay ahayd muhiimadda ugu weyn.
Sanadihii la soo dhaafay, gaar ahaan haweenka hodanka ah ee ka soo jeeda qaybaha bulshada ugu sarreeya, waxay awoodeen inay horumariyaan waxqabadyo kala duwan oo ka duwan darbiyada guriga:
Intii boqortooyadu jirtay Taang: waxaa jiray haween fardo fuuli kara.
Intii boqortooyadu jirtay Song iyo bilowgii boqortooyadii YuanWaxaa jiray haween kaligood u safri kara sababo ganacsi awgood, xitaa waxaa jiray niman Taoist ah oo hormood ka ahaa warshadaha cudbiga.
Si kastaba ha noqotee, kuwa caanka ah dhaqanka faashadda dumarka, taasoo si weyn hoos ugu dhigtay hawlahoodii, maadaama ay ku curyaamisay hawlo fara badan. In kasta oo sababta asal ahaan dhaqankan aan la garanayn, haddana waxaa la sheegay inay ahayd in lagu kala sooco haweenka Shiinaha iyo dumarka ajnabiga ah, maadaama tan dambe loo tixgeliyo inay ka liitaan.
Waxay u mahad naqday kacdoonkii Raadinta, in lagaa mamnuucay faashadda lugaha, taas oo dumarka u siinaysa xorriyad dheeri ah.
Wacyigaliyaasha Protestant, dabayaaqadii qarnigii XNUMXaad, waxay door bidayso in hablaha waxbarida la baro. Dhinaca kale, tan iyo markii uu xukunka la wareegay Xisbiga Shuuciga, wuxuu sameeyay dadaal lagu hormarinayo sinnaanta ragga iyo dumarka laakiin iyada oo aan laga tagin qaab dhismeedka qoysaska soo jireenka ah. Sababtaas weeye, sababta xitaa maanta, qoysaska qaar uga baxaan gabdhaha xarumaha agoomaha halkaasoo ay ku nool yihiin nolol liidata mararka qaarkoodna, waxaa loo geystaa dhaqammo ka baxsan bini'aadanimada.
Labiska, booskaaga bulsheed
Shiinaha, tan iyo waagii hore, had iyo jeer waxay siisay a astaan ​​gaar ah dharkooda. Tusaale ahaan: dagaalyahannadii boqortooyooyinkii diriray waxay madaxa ku xirteen laba baal shimbir. Tani waxay astaan ​​u noqotay geesinimada iyo xoogga halgame.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee dharka dhaqameed ee Shiinaha ayaa ah in aysan ahayn oo keliya calaamadda dibedda ee xarrago, laakiin sidoo kale waxaa lagu siiyay qiimo astaan ​​gaar ah. Dhammaan qaybaha dharkani waxay la xiriiraan xoogga muhiimka ah ee ku jira iyaga.
Waxa ugu weyn noocyada dharka dhaqanka Shiinaha Waxay yihiin:
El pien-fu, oo ka kooban laba qaybood, khamiis jilbaha gaadha iyo goonni gaadho anqawyada.
El ch'ang-p'ao ama suud dheer, oo loo isticmaalo ragga iyo dumarka labadaba.
Ugu dambayntiina shen-i, oo isugu jira labadii hore.
Dharkaan midabada madow waxay ku badan yihiin kuwa iftiinka leh, waxaana lagu sameeyay shaashad qurux badan oo midabbo dhalaalaya leh. Midabada iftiinka ah ayaa loo daayay maalin kasta, inay shaqeeyaan, iwm. Shiineeska midabbada qaar laxiriir xilliyada sanadka: cagaar wuxuu matalaa guga; casaan, xagaaga; cad, dayr iyo madow, jiilaal.
Jimicsiga ugu badan ee Shiinaha waa 'wushu', naloo yaqaan sida 'Kung fu'. Midkani jimicsi isdifaacid iyo tababar jirka ah Waxaa ku dhaqma dadka Shiinaha kumanaan sano, maantana, ku dhaqankeeda waa la xoojiyay.
Isboortigaani wuxuu ka kooban yahay fulinta weerarada iyo dhaqdhaqaaqyada difaaca iyadoo la adeegsanayo xoog iyo deg deg. Waxaa jira laba qaybood oo ka mid ah:
Cayaarahaan soo jireenka ah iyo taariikhda waxaa soosaaray soona saaray Shiineeska, daaweyn ahaan, dagaal iyo shaqo wax soo saar. Ka mid ah 'wushu' Waxaa jira kala qaybsanaan iyo noocyo kala geddisan iyo hubka loo adeegsaday qaar ka mid ah sabarka, waranka, seefta, usha ama jeedal, kuwa kale.
Thanks to quruxda dhaqdhaqaaqa ee isboortigaan, ka 'wushu' yimid sidoo kale masraxa iyo tiyaatarka Shiinaha, halkaas oo acrobatics-ka ay tahay xirfadda inta badan la arko.
Dhammaan jinsiyadaha Shiinaha waxay had iyo jeer jecel yihiin ciyaaraha fudud, iyagoo la dagaallamaya inay yihiin xirfadda ugu weyn ee ay horumariyaan.
Haddii aad booqanaysid wadanka huruudda ah dhaqsaha badan ama aad uhesho meel mustaqbal mustaqbalka ah, hada waad ogtahay qaar ka mid ah waxyaalaha gaarka ah ee ay leedahay Haddii aad xiisaynayso maqaalka noocan ah oo aan ku soo bandhigeyno asalka dhaqamada kala duwan ee hadda jira, nala soo socodsii qaybta faallooyinka. Mahadsanid!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Shiinaha: Doorka haweenka, dharka caadiga ah iyo cayaaraha dhaqanka
La Toja, janno lagu nasto
Talooyin ku saabsan safarka carruurta